‘एकल आमा’ « Mero LifeStyle
मेरो लाइफस्टाइल	||7August, 2021
उनकी आमा असाध्यै सुन्दर छिन् । अधबैंसे उमेरमा पनि आमाको छरितो सलक्क शरीर, तेजस्वी अनुहार देखेर हैरान नहुने मान्छे कमै छन् । आमा छोरी सँगै भएको बेला सबैले दिदीबहिनी भन्छन् । जब आमा–छोरी भएको भेउ पाउँछ, मानिसहरू आमाकै सौन्दर्यताको कुरो उठाइहाल्छन् । आमाको यही सौन्दर्यताले सबैभन्दा बढी कोही मोहित छिन् भने उनकै छोरी छन् । आमाको पिँडौला यस्तो, हाइट यस्तो, कम्मर झन् कति आशक्त, आँखाको त कुरै नगरौं, नाक कति सुलुत्त, कपाल नेचुरल्ली सधैं कति राम्रो वाह वाह !
उनले एकपटक भन्दा बढी कहिल्यै पनि सोधिनन् किन आमाले एकल जीवन व्यतित गर्नुपर्यो भनेर । एकपटक सोधेको बेलामा उनको बुबाले छाडिदिएको भन्ने मात्रै जानकारी पाइन् । आमाले उनको बाबुले किन छाडे भनेर कहिल्यै भनेकी थिइनन् ।
छोरीको वाहवाहीमा आमा यसै पनि दङ्ग थिइन् तर, कहिल्यै कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दिन थिइन् । छोरी खुलेर आमाको सौन्दर्यता मात्र होइन, आमाले सम्हालिरहेको भान्साको सबै व्यवहारको गुण गाउँथिन् । ओछ्यानमा आमासँग खेल्ने, गुनगुनाउने र रमाइलो कुराहरु सेयर गर्ने कुरामा निकै रमाउँथिन् ।
आफ्ना कुराहरू राख्ने, अपेक्षाहरु व्यक्त गर्ने र ति सबै पूरा गरिदिएकोमा आमाप्रति कृतज्ञ हुँदै प्रेम पस्किन्थिन् । उनले एकपटक भन्दा बढी कहिल्यै पनि सोधिनन् किन आमाले एकल जीवन व्यतित गर्नुपर्यो भनेर । एकपटक सोधेको बेलामा उनको बुबाले छाडिदिएको भन्ने मात्रै जानकारी पाइन् । आमाले उनको बाबुले किन छाडे भनेर कहिल्यै भनेकी थिइनन् । एकदिन उनले आमालाई बोलाइन् र भनिन् :–
आमा तपाई असाध्यै सुन्दरी हुनुहुन्छ, यो दुनियाँले सुन्दर र कुरुप चिज पहिले देख्दोरहेछ, तपाईको सौन्दर्यता सबैले पहिला देख्यो । अनि देखेको चिजको पहिले विश्लेषण ग¥यो कि तपाई असाध्यै सुन्दर हुनुहुन्छ । आमा तपाई हरेक निर्णयमा एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ,, त्यसैले एकल जीवनलाई निराशाले होइन, प्रेमले उठाउने निर्णय लिनुभयो ।
आमा तपाई सीप र व्यवसायलाई जोड्ने सफल सूत्र हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईले गर्ने मोडलिङ र अभिनय, भान्साको अचार मोल्ने काम, मसला पिस्ने र कपडा सिलाउने कामलाई अहिले पनि सूत्रवद्ध सीपमा आफूजस्तै आमाहरुलाई लगाइरहनुभएको छ । आमा तपाई महाज्ञानी हुनुहुन्छ,, आफ्नो सीप, सामथ्र्य र संघर्षले जसरी जिउनुभएको थियो ति सबै सीपहरुसँग मेरो बुबा अर्थात् तपाईको प्रेमी तपाईको लोग्ने भएपछि सहमत हुनसक्नुभएन ।
आमा मलाई थाहा छ, मेरो भविष्यको चिन्ताले तपाईको मुहारलाई हरदम छोपिरहन्छ र त खुलस्त हाँस्नुहुन्न । म आफ्नो भविष्य खोज्दै हिँड्दिन आमा । यो समाजले हेर्ने, देख्ने खोज्ने भविष्य भनेको मेरो लोग्ने हो । त्यसैले पीर नगर्नुस् आमा म तपाई जस्तै एकल हुन मनग्य योग्य छु ।
तपाईको बाटुलो कम्मर, सुडौल शरीरभरि उहाँको दाँत, ओठ मात्रै धसिरहनु पर्दथ्यो, तपाईको सुनौलो केशमा उहाँको हातको सुम्सुम्याई वा क्रोधको जङ्ग मात्रै चल्नुपर्दथ्यो । तपाईको मुस्कान उहाँको मदिरा, चुरोट र चकलेटमा उड्नपर्दथ्यो, दलिनुपर्दथ्यो । तपाईको क्रोध कुनै पनि ज्ञानेन्द्रीयहरुबाट बाहिर आउनै दिएनन् । तपाईको असीमित समर्पित प्रेमलाई पूर्ण सत्तामा आउनै निषेध गरिदिए । तपाईमाथिको यही निषेध र दलन तपाईको महाज्ञानमा रूपान्तरित भयो आमा ।
तपाई एउटा क्रान्ति हो आमा, यो समाजको नियम, उपनियम र अन्धविश्वासहरूसँगै आफ्नो एकदशकको प्रेमका लागि गर्नुभएको सबै योगदानहरुलाई कुल्चनुभएको छ, मिल्काउनुभएको छ । आमा मलाई थाहा छ, मेरो भविष्यको चिन्ताले तपाईको मुहारलाई हरदम छोपिरहन्छ र त खुलस्त हाँस्नुहुन्न । म आफ्नो भविष्य खोज्दै हिँड्दिन आमा । यो समाजले हेर्ने, देख्ने खोज्ने भविष्य भनेको मेरो लोग्ने हो । त्यसैले पीर नगर्नुस् आमा म तपाई जस्तै एकल हुन मनग्य योग्य छु ।
खसी 🐐 « Mero LifeStyle
[…] लामाद्वारा लिखित अन्य सामाग्रीहरु‘एकल आमा’एकल आमा–२प्लीज […]
[…] सुत्केरी ४ दिनदेखि अस्पतालमै बन्धक‘एकल आमा’एकल आमा–२दशैँ अघि नै बालबालिकालाई […]
यसकारण बढ्दै छ नेपालमा निःसन्तान हुनेको संख्या, कसरी बच्ने ? « Mero LifeStyle
[…] सुत्केरी ४ दिनदेखि अस्पतालमै बन्धक‘एकल आमा’एकल […]
अहिलेको साहित्य पुरस्कार र सेलिब्रेटी बन्ने दौडमा छ « Mero LifeStyle
[…] पनि पढ्नुहोस्‘एकल आमा’एकल आमा–२‘पाङ्ग्रा’प्लीज […]
एकल आमा–२ « Mero LifeStyle
[…] लामाद्वारा लिखित अन्य सामाग्रीहरु‘एकल आमा’प्लीज […]